RASMI: David Luiz oo heshiiska u kordhiyay kooxdiisa Chelsea – Gool FM
RASMI: David Luiz oo heshiiska u kordhiyay kooxdiisa Chelsea
Dajiye May 10, 2019
(England) 10 Maajo 2019. Daafaca heerka caalami ee reer Brazil David Luiz ayaa heshiiska u kodhiyay kooxdiisa Chelsea.
David Luiz ayaa maanta qalinka ugu duugay kooxdiisa Chelsea heshiis cusub, oo garoonka Stamford Bridge ku sii heyn doono ilaa iyo sanadka 2021.
Daafacan ayaa xili ciyaad fiican ku qaatay kooxdiisa Blues 2018/2019, waxaana uu u saftay 48 kulan ee ah tartamada oo dhan, isagoo u dhaliyay 3 gool, taasoo ka dhigtay in Chelsea ay ku dhameysto 4-ta sare ee horyaalka Premier League, si xili ciyaareedka dambe ay kaga soo qeyb gasho tartanka Champions League, sidoo kale waxay xalay goosteen tikitkooda finalka UEFA Europa League.
David Luiz ayaa ka hadlay dareenkiisa kaddib markii uu qalinka ugu duugay kooxdiisa Chelsea heshiiska cusub, wuxuuna yiri:
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan joogo, iyo in kooxda ay i siiso fursad aan halkan ku sii joogo wakhti dheer”.
“Waan jeclahay kooxdan, walina waxaan heystaa dareenka ah inaan jeclahay tan iyo markii aan aan ahaa ciyaaryahan da’ayar ah”.
“Micno ayay ii sameyneysaa inaan gaaro final kale ee Yurub ah, wali waxaan heysanaa fursada aan ugu dhameysan karno kaalintsa saddexaad xili ciyaareedkan horyaalka Premier League, waxaan sii wadi doonaa inaan isku dayo inaan sideyda ugu fiican u caawiyo kooxda”.
Illaa iyo hadda xirfaddiisa kooxda Chelsea, David Luiz ayaa wadar ahaan u saftay 246 kulan, waxaana uu u dhaliyey 18 gool.
Sergi Roberto oo fariin raali galin ah u diray taageerayaasha Barcelona, kaddib qaabkii niyadjabka ahaa ay kaga soo hareen Champions League
SAWIRRO: Chelsea oo qabsatay xafladeeda Sanadlaha....(Hazard oo isku qaatay Labo abaal marin)